CNDF Special Commando Training An Hlawhtling, NUG In Ca A Kuat – Meifar
CNDF Special Commando Training An Hlawhtling, NUG In Ca A Kuat
December 3, 2021 admin Lawrkhawm 0
CNDF Special Commando Training (1/2021) Closing Ceremony cu tuini (December 3, 2021) ah tluangten an tuahsuak thei. Cutawk ah Ministry of Defence – National Unity Government of Myanmar ih Union Minister, U Ye Mon hnen ihsin lungawipinak cakuat an dawng.
NUG in ahmaisa bik ah cibai buknak an nei ih, “Nan pekawknak hi neta thangthar nonawn pawl hrangahasi, kan rampi hmailam caan hrangahasi. Pekawknak tello in dothlennakacang thei lo, ralhrang pawl thawn kan danglamnak cu “Thinlung, ruahnak” hiasi.
Minung mizia, thinlung nei lo ralhrang pawl cu tapung an si. Dothlennak ih neh/duainak cu ralthuam ahasi lo, thinlung ahaṭhumaw. Kan thinlung kan ti pacang ih kan tangrual ding, mipi pawl ih thazang peknak thawn in ralhrang pawl ih sal uknak hi kan do neh ding ti kan zum. Nan ṭuanpi unau dang pawl thawn lungrual zetin umtlang uh. Dothlennak ah kan neh ding” tin an tarlang. (NUG ih cakuat hi kan lettawiasi, Kawlca ih siar duh hrangahnuaiah)
အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးကပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ “ရဲဘော်တို့အားလုံး ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါသည်။ CNDF အထူးကွန်မန်ဒိုသင်တန်းအမှတ်စဥ် (၁/၂၀၂၁) ဆင်းပွဲသို့ အခုလို သဝဏ်လွှာ ပါးခွင့် ရသည့်အတွက် အထူး ဂုဏ်ယူ​ကြောင်း ​ပြောလိုသည်။ ရဲဘော်တို့တို့၏စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်မှုများသည်နောင်လာနောက်သားငါတို့မျိုးဆက်များအတွက်ဖြစ်သည်။ငါတို့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်၏အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးစစ်ကျွန်ဘဝမှလွှတ်မြောက်ရေးအတွက်အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဝင်ရန်ရည်ရွယ်လျက်ဤစွန့်လွှတ်ပေးဆပ်မှုများကို အရင်းအနှီးပြုနေသည့် ရဲ​ဘော်တို့အားလုံးကို ဤ​နေရာမှ ဦးညွှတ်အ​လေးပြုလိုက်ပါသည်။ရင်းနှီးပေးဆပ်မှုမရှိဘဲ တော်လှန်ရေးသည် မရှိနိုင်။ဤတော်လှန်ရေးအတွက်ဘဝ၊အသက်နှင့်ခန္ဓာကိုစွန့်လွှတ်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဆင်းရဲပင်ပန်းမှုဒဏ်မှန်သမျှကို ကြံ့ကြံ့ခံ ကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။
ငါတို့​တော်လှန်​ရေးရဲ​ဘော်များနှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ် လက်ကိုင်တုတ်များကြား အဓိကကွာခြားမှုမှာ “စိတ်ဓာတ်” ဖြစ်သည်။
၄င်းစစ်ကောင်စီ၏ လက်ကိုင်တုတ်များသည် ယုံကြည်ချက်မဲ့၊ ကျင့်ဝတ်မဲ့၊ စည်းကမ်းမဲ့၊ အသိညဏ်မဲ့၊ စိတ်ဓာတ် ဖရိုဖရဲဖြစ်လျက် တပ်မတော်ဟူသည့် အမည်နာမကိုပင် ခံယူရန် မထိုက်တန်သော၊ တပ်မတော်တစ်ရပ်၏ အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းခဲ့ပြီဖြစ်သော လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများအဖြစ် မြင်တွေ့​နေရသည်။
ဤအခြေအနေတွင် ငါတို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားများ၏ စိတ်ဓာတ်တံခွန်ကို အမြင့်ဆုံးအထိ ဆက်လက်လွှင့်ထူထားရန် လိုအပ်သည်။ တော်လှန်‌ရေးတစ်ရပ်၏ အနိုင်အရှုံးကို လက်နက်က ဆုံးဖြတ်သည်မဟုတ်။ စိတ်ဓာတ်ကသာဆုံးဖြတ်ပေသည်။ ငါတို့၏ စိတ်ဓာတ်အင်အား သာလွန်မှု၊ဗျူဟာမှန်ကန်မှု၊ပြည်သူ၏ အားပေးထောက်ခံကူညီမှုဖြင့် စစ်ကောင်စီ၏ကျွန်ပြုအုပ်စိုးမှုကို တိုက်ဖျက်အနိုင်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဟု ငါတို့ယုံကြည်သည်။
ဤတော်လှန်ရေးတွင် အတူတကွ တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိ​သော ညီနောင်များ၊မဟာမိတ်များအပေါ်တွင်လည်း ညီရင်းအကိုစိတ်ဓာတ်ကို အရင်းပြုလျက် ယုံကြည်မှု၊ လေးစားမှုထားကြရန် တိုက်တွန်းသည်။ ယခုအခါ ငါတို့နိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုံ ပါဝင်လျက် ပြည်သူ့တော်လှန်ရေး တနည်းအားဖြင့် ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကို တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဆင်နွှဲ​နေကြပြီ ဖြစ်ရာ ရဲဘော်တို့အားလုံး ကျရာတာဝန်ထမ်းရွက်ရန် အသင့်ရှိကြစေလိုသည်။ “အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။”